ဗီဇာ သက်တမ်းတိုး နိုင်ရေး အတွက် Online မှ လျှောက်ထားရန် အသိပေး ကြေညာခြင်း - Myanmar Builders Guide
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိသည့် ကုမ္ပဏီ များမှ နိုင်ငံခြားသား ဒါရိုက်တာများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ ပညာရှင်များ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင် များ၏ Business Visa အမျိုးအစားအား ဗီဇာသက်တမ်းတိုး ထောက်ခံချက် ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိရာ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဤဦးစီးဌာနသို့ အမှာစာ လာရောက်တင်ပြခြင်းအား လျော့ချလိုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန်အတွက် ၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ Online ဖြင့် စတင်လက်ခံ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါ၍ https://www.dica.gov.mm - Company Affairs - Online Visa Extension သို့ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်းနှင့် ဗီဇာထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးသည့် ရက်စွဲ၊ စာအမှတ်နှင့် User Guide တို့ကို အဆိုပါ Link တွင် အသိပေး ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် မိတ္တူများ၏ File type မှာ jpg, pdf, jpeg, gif, png, docx, doc အမျိုးအစား ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျင် Account တစ်ခုသာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဇာကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုသည်များအား ဖုန်းအမှတ် ၀၁-၆၅၈၁၀၅ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၃။ ဗီဇာသက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်းကို Online ဖြင့် ပြောင်းလဲ လက်ခံဆောင်ရွက် သော်လည်း မူလလျှောက်ထားမှု ပုံစံနှင့် တင်ပြခြင်းကိုပါ နည်းလမ်း(၂)မျိုးဖြင့် ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက် နေ့အထိ တစ်လတိတိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန
" Announcement on Online Application for Visa Extension"
1. Directorate of Investment and Company Administration(DICA) has been providing recommendation for Business Visa Extension of Foreign Directors, members, technicians and their family members of the companies registered at DICA registry and has not permits from Myanmar Investment Commission (MIC).Due to the Covid-19 outbreak, we want to reduce the number of orders submitted to this department for the companies and to make easier for entrepreneurs. So online application will start from 1-8-2020and apply to https://www.dica.gov.mm Company Affairs Online Visa Extension
Visa Extension Date, Letter No. and User Guide will be announced at that link.
2. Companies must submit attached copies with jpg, pdf, jpeg, gif, png, docx, docfile type. Only one account per company can be used. For more information about Visa issues, you can call 01-658105 during office hours.
3. Although Visa Extension is with Online, it is announced that the original application form will be accepted foramonth until 31-8-2020 in two ways.